अभिनेत्री पुजा शर्माको आक्रोश: 'ओइ चुप प्रकाश सुवेदी' - www.dthreeonline.com
अभिनेत्री पुजा शर्माको आक्रोश: ‘ओइ चुप प्रकाश सुवेदी’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: १२:४०:४३
ईटहरी/ कार्यक्रम रजतपटमा प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले बोल्ने एक लाईनले प्रायः उनैलाई गिज्याईरहेको हुन्छ । ‘बिनासकारी बिपरित बुद्धि’ । बेलाबखत उनले रिपोर्ट र अन्तरबार्ता चिप्ल्याईदिन्छन । अनि विवाद र आलोचना उनी संगै कलाकारले समेत खेप्नु पर्छ । यतिबेला फेरि त्यस्तै भएको छ । गरिमा शर्माको अतिरन्जित रिपोर्टपछी फेरि कलाकार र रजतपटबिचको विवाद सुरु भएको छ । यता अभिनेत्री पुजा शर्माले पनि होस्टेमा हैसे गरेकी छन् ।
शर्माले आफ्नो ईन्स्टा स्टोरिमा ‘ओइ चुप प्रकाश सुवेदी’ भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन् । यसलाई गालिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । रजतपटमा यस्तो किसिमको रिपोर्ट बज्नु, राती गरिमा रुदै लाईभ आउनु, लाईभमा उनले पुजाको नाम लिनु र पुजाले पनि यस्तो आक्रोश ब्यक्त गर्नुमा गरिमा शर्मालाई पुजाको पुर्ण समर्थन देखिन्छ । नदेखियोस पनि कसरी ? पुजापनी उहीँ रजतपट पीडित नै हुन् ।
यस्तो छ विवादको नालिवेली:
टिकटकबाट स्टार बन्दै नेपाली संगीत उधोगमा राज गर्नेहरुको लहर छ यतिबेला । यो क्षेत्रमा उत्पादन हुने संगीतको भिडियोमा टिकटक स्टारहरुको अभिनय पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा देखिन्छ । त्यही बिचको नाम हो ‘गरिमा शर्मा’ । टिकटकमा कला प्रस्तुत गर्दै सौन्दर्यताका कारण पनि उनी म्युजिक भिडियो ईन्ड्रस्ट्रीमा हाम फालिन । सफल पनि भईन् । म्युजिक भिडियोमा उनले थुप्रै मेल मोडलहरु संग काम गरिन् । जसमध्येको एक नाम हो दुर्गेश थापा । यी २ बिच राम्रो मित्रता कायम छ भन्ने म्युजिक भिडियोमा सहकार्यका हिसाबले पनि बुझ्न सकिन्छ । हेर्नुस गरिमा रुदै लाईभ आएको भिडियो
बेलाबखत टिकटक लाईभमा पनि यी २ एकअर्काको ईन्भाईटमा आईरहन्छन् । तर पछिल्लो समय भएको यी २ को संयुक्त टिकटक लाईभले भने विवाद सिर्जना गर्दियो । आफ्ना टिकटक फ्यानहरुको लागि लाईभमा रमाईलोको होस भन्ने हेतुले गेम खेले । गेम खेल्ने क्रममा गरिमाले पुर्वप्रेमी संगको भेट र भेटपछी सम्बाद बोल्नुपर्ने दुर्गेशले आग्रह गरे । शर्मालाई को-एक्टर नभएपछि सो अभिनय गर्न अलि असहज । जस्लाई समाधान गर्दै थापाले आफुलाई नै पुर्वप्रेमी सम्झिन आग्रह गरेपछि सम्बाद अगाडि बढ्छ ।
सम्बन्धित समाचारका लागि यहा क्लिक गर्नुहोला।
सो क्रममा बोलिएका शब्द तथा भिडियो क्लिपहरु टिकटकमा भाईरल भयो । यतिमात्र हैन चर्चित फिल्मी टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटमा पनि यो बिषयले स्थान पायो । स्थान त पायो तर, अतिरन्जित तवरले । रजतपटका प्रस्तोता प्रकाशलाई गरिमाले फोनबाटै यो बिषयमा जानकारी गराएको बताएकी छन् । तर, पनि सो कुरालाई बेवास्ता गर्दै दुर्गेश, गरिमाको पुर्वप्रेमी रहेको र हाल छुटेको, थापा विवाहित भएपनी त्यसको वास्ता नगरेको आसयको रिपोर्ट बनेपछी यो विवादले झनै उग्र रुप लिएको छ । शर्माले न्यायको लागि लड्ने बताएकी छन् । कुरा कहाँ सम्म पुग्छ ? त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।